Ka Hor Finalka FA Cupka, Eden Hazard Oo Shuruud Adag Ku Xidhay Mustaqbalkiisa Chelsea Iyo Qiimaynta Uu Ku Sameeyay Xili Ciyaareedka Blues. – GOOL24.NET
Ka Hor Finalka FA Cupka, Eden Hazard Oo Shuruud Adag Ku Xidhay Mustaqbalkiisa Chelsea Iyo Qiimaynta Uu Ku Sameeyay Xili Ciyaareedka Blues.
Xidiga xulka qaranka Belgium iyo kooxda Chelsea ee Eden Hazard ayaa si cad u muujiyay sababta uu Stamford Bridge ku sii joogi karo xili ciyaareedka soo socda wuxuuna hadalkan sheegay ka hor kulanka xili ciyaareedkan Blues ugu muhiimsan ee ay finalka FA Cupka kula ciyaari doono Man United. Hazard ayaa sidoo kale qiimayn ku sameeyay xili ciyaareedkan dhamaadka ah ee kooxdiisa.
Eden Hazard ayaa muujiyay in waxa uu maamulka kooxdiisa ka doonayaa tahay in ciyaartoy muhiim ah ay kooxda keenaan si xili ciyaareedka soo socda uu kooxda ugu sii nagaan karo isla markaana uu koobka Premier League ugu guulaysto, wuxuuna sheegay in xili ciyaareedkani uu ahaa mid kooxdiisa ku xumaa.
Hazard ayaa muujiyay sida finalka FA Cupku uu kooxdiisa Chelsea muhiim ugu yahay isaga oo ku saleeyay in ayna u soo bixin Champions League isla markaana ayna wax koobab ah ku soo guulaysan xili ciyaareedkan. Hazard ayaan wali saxiixin qandaraas cusub oo ay kooxdiisu u soo bandhigtay kaas oo 300,000 kun gini uu usbuucii ku qaadan doono.
Eden Hazard oo shuruuda uu kooxdiisa uga baahan si uu heshiiska cusub u saxiixo oo uu Stamford Bridge u sii joogo ka hadlaya ayaa yidhi: ” Anigu waxaan sugyaa ciyaartoyda cusub ee xili ciyaareedka soo socda. Waxaan doonayaa ciyaartoy fiican, sababtoo ah waxaan doonayaa in aan xili ciyaareedka soo socda ku guulaysto Premier league”.
Eden Hazard oo hadalkiisa sii wata ayaa yidhi: ” Waa waxyaabo badan, kadib waynu arki doonaa, waa wax aad u wayn, sidaa daraadeed, waxaan anigu u baahanahay in aan waxyaabo badan ka fikiro”.
Intaa kadib Hazard oo ka hadlaya finalka FA Cupka ayaa yidhi: “Koob ayaanu u baahanahay dhamaadka xili ciyaareedka, hadda waxba ma hayno. Umaanu soo bixin Champions League xili ciyaareedka soo socda, sidaa daraadeed waxa uu xili ciyaareedkani ahaa mid xun”.
Hazard ayaa aaminsan in xili ciyaareedka xun ay ku yara badbaadsan karaan ku guulaysiga koobka FA Cupka ee Man United la ciyaari doonaan wuxuuna yidhi: “Hadda waxaanu ku yara badbaadsan karnaa koobkan, sidaa daraadeed, wax walba waanu siin doonaa. Anigu halkan waligay FA cupka lix sano ugumaan guulaysan, sidaa daraadeed, waxaan rajaynaya in sanadkani uu yahay kaygii iyo kii Chelsea”.
Ugu danbayn Hazard ayaa sheegay sida uu ugu hamiyayo in koobabka FA Cupka iyo Champions League uu ku dhamaystiro koobabka uu Chelsea kula soo guulaystay wuxuuna yidhi: “Waxaan u baahanahay koobab kale oo dheeraad ah si aan halkan ugu dhamaystiro- Champions League iyo FA Cupka. Koobabku waa muhiim, anigana way iiga sii muhiimsan yihiin, sababtoo ah kan kumaan guulaysan waligay”.